Accueil > Gazetin'ny nosy > Fisokafan’ny sisintany : Atakalo vola ny ain’ny vahoaka malagasy
Androany asabotsy faha 23 oktobra 2021 no hisokatra ny seranam-piaramanidina malagasy amin’ny sidina avy atsy La Réunion sy ny Nosy Maurice. Ny faha 6 novambra 2021 no hoan’ny sidina avy any Erôpa manketo Madagasikara.
Arahabaina ny fahafatesana vaovao ho vokatrin’ny fihanakin’ny covid-19 noho izany. Tsy ilaina mandinika lalina akory ny antony ilazana izany fa ny zava-misy amin’ireo firenena ireo no tsy maintsy ho tonga eto Madagasikara amin’ity valan’aretina covid-19 vaovao ity indray.
Ny atsy amin’ny nosy la Réunion dia 54 024 ny isan’ny olona mitondra ny otrikaretina ary 370 no maty rah any tarehimarika nivoaka ny 22 oktobra 2021. Ny atsy amin’ny nosy Maurice indray dia 16 951 ny mitondra ny otrkaretina ary 145 no maty tamin’ity 22 oktobra 2021 ihany.
Ny any Royaume Uni dia 8 tapitrisa mahery no mitondra ny otrikaretina ary 223 000 ny olona maty. Anarivony isan’andro ny olona mitondra ny otrikaretina. Ny any Russie dia 8 tapitrisa mahery ny olona mitondra ny otrikaretina ary 139 000 no isan’ny maty. Tarehi-marika tao anatin’ny roa andro avokoa ireo.
Ireo no tsy maintsy olona ho tonga eto Madagasikara manomboka izao. I Madagasikara izay misokatra amin’ ny any ivelany hatramin’izao. Tsy maintsy hitondra otrikaretina covid-19 ny olona izay hiditra eto ireo.
Ny olona vita vaksiny eto Madagasikara dia tsy ampy 3% ny mponina akory hatramin’izao. Covishild 250 000 daozy miampy 200 000 daozy taty afara no vakisiny vita teto Madagasikara izay olona eo amin’ny 400 000 nahazo fanefitra amin’izany. Miampy azy amin’izany ny vaksiny Jenssen tonga taty afara. Ny Malagasy izay 25 tapitrisa mahery.
Manomboka izao dia tandidonin-doza indray I Madagasikara amin’ny fisokafan’ny sisintany io. Atalo vola ny ain’ny Malagasy satria mahantra.